Sida loo beddelo magaca uu Caawiye Google adeegsado si uu kuugu yeero | Androidsis
Sida loo badalo magaca Kalkaaliyaha Google kuugu yeero
Markaan u isticmaalno Kaaliyaha Google taleefankeena Android, kaaliyaha ayaa noogu yeera magaca aan weydiisanay. In kasta oo aan haysanno suurtagalnimada in magaca loo beddelo midka na soo waca marka aan doonno. Tani waa wax xiiso u noqon kara xaalado badan, ama haddii aan si fudud u door bidno inaad noogu soo wacdo qaab cayiman.
Waa hab ka mid ah astaysto isticmaalka Kaaliyaha Google ee ku saabsan Android. Saaxirka caanka ah sii wad joogitaanka iyo helitaanka shaqooyin, markaa isticmaalkeedu sidoo kale wuxuu si gaar ah ugu kordhay taleefannadeenna. Ficil noocan ah ayaa wanaagsan in la ogaado oo la awoodo in la isku dayo.
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno kiiskan ayaa ah fur Kaaliyaha Google taleefankeena Android. Kadib, markaanu furno, dhagsii astaanta yar ee ka muuqata qaybta bidix ee hoose ee kaaliyaha, taas oo na geyn doonta shaashad cusub, oo aan ka geli karno dejintooda.
Guji sawirka kootadeena Google oo gal goobahaan kaaliyaha. Tabka ugu horreeya ee ka muuqda shaashadda waa Adiga, halkaasoo aan ku riixeyno markaa. Halkan ayaan ku kulmi doonnaa iyadoo xulashada loo yaqaan naanaysta ama magaca, taas oo ah waxa xiisaynaya kiiskan.
Qeybtaan waan wax ka badali karnaa magaca kaas oo Kaaliyaha Google uu nagula soo hadli doono telefoonka. Kaliya waa inaan qornaa magaca aan dooneyno inuu saaxirku ku adeegsado kiiskan. Guud ahaan, waxay noqon kartaa waxa aan dooneyno, ma jiraan wax xaddidan oo xagga magaca ah, si qof walba uu u doorto wuxuu doonayo.
Markaa waa inaad siisaa si aad u keydiso. Markaa waxay u badan tahay taas Kaaliyaha Google ayaa ku weydiin doona haddii kani yahay magaca maxaad rabtaa inaan kuu soo waco. Kaliya waa inaad aqbasho oo waxaan magaca ku badalnay qaabkan. Waan beddeli karnaa markasta oo aan dooneyno, dhibaato la'aan, waa wax fudud oo lagu guuleysan karo sida aad u aragto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Sida loo badalo magaca Kalkaaliyaha Google kuugu yeero
Samsung waxay tirtiraysaa xayeysiisyada dhaleeceynaya maqnaanshaha iPhone ee maqalka maqalka